विस्वासको मतः सके सत्ता टिकाउने, नसके अर्को निर्वाचनको घोषणा गर्ने? - Malayakhabar
होम पेज फिचर विस्वासको मतः सके सत्ता टिकाउने, नसके अर्को निर्वाचनको घोषणा गर्ने?
विस्वासको मतः सके सत्ता टिकाउने, नसके अर्को निर्वाचनको घोषणा गर्ने?
काठमाडौं := कहिले संसदै विघटन गर्ने कहिले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएर असाध्यै आलोचना मात्र हैन कि लोकतन्त्रमाथि नै धावा बोलेको आरोप लागेका प्रधानमन्त्रीले एकाएक विस्वासतको मत लिने भन्दै संसदको बिशेष अधिवेशन गरेर विस्वासको मत लिने भने पछि दलहरुले त्यसको तयारी गर्न शुरु गरेका छन् ।
बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
त्यसो त सत्ता बदल्ने खेलमा लागे पनि माओवादी केन्द्रको समर्थन कायम छ प्रधानमन्त्रीलाई । विष्लेषकहरुले प्रधानमन्त्रीले सके विस्वासको मत लिने र संसदमा बहुमत कायम गर्ने त्यसो नभए मध्यवाधी निर्वाचन घोषणा गर्ने सुरसार गरेको अनुमान गरेका छन् ।
के प्रधानमन्त्रीले पाउन सक्छन् विस्वासको मत ?
सर्वोच्चले फागुण २३ मा एमाले र माओवादी व्युताईदिए पछि पनि एमाले संसदको सबै भन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको छ । २७५ सदस्यीय संसदमा एमालेको १२१ सिट रहेको छ ।
यसमा अब ५० प्रतिशत नघाउन १५ सांसदको समर्थन भए पुग्छ । त्यसका लागि जसपा भित्र महन्त राजेन्द्र महतो खेमालाई प्रधानमन्त्रीले तान्ने प्रयास गरीरहेका छन् । जसपाको ३२ मध्य अहिले ३२ जना सांसद रहेका छन् । जसपाबाट बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव खेमाले प्रधानमन्त्री ओली बिरुद्ध उभिने निर्णय गर्दै १८ सांसदको हस्ताक्षर गरेको भनिएको थियो ।
अहिले ठाकुर खेमाले पनि सांसदलाई काठमाण्डौं बोलाएर हस्ताक्षर जुटाउन खोजेको बताईएको छ । यदी ठाकुर खेमाले १५ सांसदको हस्ताक्षर जुटाउन सकेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता टिकाउन केही सहज हुनेछ ।
अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले भर नगरेका आफ्नै पार्टीका सांसदहरु हुन् जो माधव नेपाल समुहमा छन् । पार्टी भित्र एक हिशाबले शत्रुतापूर्ण व्यवहारको शिकार बनिरहेको महसुस गरेका माधव नेपाल पक्षका दर्जनौं सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरे के गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले त्यस बिषयमा पनि ध्यान दिएको बताईन्छ ।
यस अघि कर्णालीमा माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको पक्षमा फ्लोर क्रस गरेर एमालेका चार सांसदले मत दिए पछि उनको कुर्सी जोगिएको थियो ।
यदी एमालेको पुरै टिमले साथ दिने हो र ठाकुरले १५ मत जुटाउने हो भने ओलीको सत्ता कायम रहने गणीतीय हिशाबले देखिन्छ । तर माधव नेपाल पक्षले के गर्ला त्यो अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन ।
विस्वासको मत नआए फेरी संसद विघटन र मध्यवाधी निर्वाचनको घोषणा ?
प्रधानमन्त्रीले नियमित अधिवेशन अन्त्य गरेर विशेष अधिवेशन मार्फत विस्वासको मत लिन खोज्नुको आशयलाई कतिपय माओवादी नेताहरु पुनः संसद विघटन गर्ने र अर्को निर्वाचन घोषणा गर्ने दाउ प्रधानमन्त्रीले हेरेको दाबी गर्दछन् ।
प्रधानमन्त्रीले विस्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने पनि अल्पमतमा उनकै सरकार कायम रहने तर चुनावको घोषणा गरेर काम चलाउ सरकारमा परिणत हुन सक्छ ।
जसपा र अन्य साना दल स्पष्ट भईनसकेको र काँग्रेस माओवादी गठबन्धन पनि सरकार बनाउन पर्याप्त नहुने हुँदा या त माधव नेपाल समुहले फ्लोर क्रस गर्नु पर्ने या त उनीहरुले संसदबाट राजीनामा दिनु पर्ने हुन्छ बिपक्षीका लागि । तर त्यो संभावना पनि अझै देखा परिसकेको छैन ।
यसैले आफै विस्वासको मतका साथ फेरी प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने र पूरा कार्यकाल पदमा रहने, निर्वाचनको घोषणा गरेर अगाडी जाने प्रधानमन्त्रीको तयारी र संभावना धेरै जानकारहरुले उल्लेख गरेका छन् ।समग्रमा जे भए पनि नेपालको राजनीतिक अस्थीरता जुनसुकै बहानामा पनि अन्त्य हुने संभावना भने नदेखिएको चिन्ता गर्न थालिएको छ ।
अघिल्लो लेख नेपालमा ५५० जना पत्रकारलाई कोरोना संक्रमण, ७ जनाको मृत्यु।
पछिल्लो लेख कलाकारहरूबाट निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु।